मगरात को कि मगर हो ??? - MONGOL KHABAR
मगरात को कि मगर हो ???
काठमाडौ । कार्तिक २ शनिबार, मगर समुदायको परिवरहरुले मगरात र आदिवासी जनजातिको नामको कमाइ नखानु नै सबैभन्दा उत्तर उत्तर लाभदायि हुनेछ । किन भने मगरहरुले मगर समुदाय लेख लेखेमा मगरहरुले हामी मुलबासी मंगोल लेख लेखेमा अति उत्तर उत्तर लाभदायी हुने छ । यो लेखलाई मध्येनजर गरि हेर्नुस् एकदिन साबित भएरै छाड्ने छ ।
मानव अधिकारको कुरा मगरात अनि आदिवासी जनजातिको नाराले र मुद्दाले बोक्नु सक्दैन यो कुरा बिश्व ऎतिहासिक र नेपाल देश अनि जनताहरुको हितको निम्ति हुनेछ । यो नै बास्तबिकता र यथार्थ कुराहरु हो । ४ जात ३६ वर्णको फुलबारी भनेर त अझै सम्म नेपालका मुलबासी मंगोलको देशमा 1495 पछाडीको समय देखि नै सुरुवात भएको हो । यो २१ औँ शताब्दीको समयलाई मध्यनजर गर्दै फर्की खोज सन्देश अनि अध्यान अनुसन्धान गर्ने क्रममा अझै पनि बिश्व भरिका देश भन्दा किन फरक ढङले फरक नितिले संचालित भैराखेको पाइन्छ, भन्ने कुराहरु छल्लङ छ । आज कै समयलाई फर्कि हेर्दा विभिन्न उपनाम नै जात जाती रहेछ । तर मगर समुदायका केही अग्रज नेता ज्युहरुको भनाइ सुन्दा म आफै ३ छक्क पर्छु । उहाँहरुको हरेक भाषणमा भन्ने गर्नु हुन्छ । हामी जात जाती अनि छुवाछूतको अन्त्य गर्छौ । फेरि आफ्नो काम गर्ने निति यानिकी शैलिहरु व्यबहारमा चाँही म मगर जातीको हु रे । त्यो फलना त्यो जातिको हो भनेर भन्छन् । यसलाई भनिन्छ मिठाइया शब्द कमजोरी त अझै तपाई हामी जस्तै साधारण मगरको नै हो । किनभने कागले कान लग्यो रे भन्दैमा रे को पछि पछि दौडनुमा हामी नै हुन्छौं । सबैभन्दा ठुलो कमजोरी त यहाँ नै हुन्छ ।
मैले आज भन्दा पहिले पनि केही लेख लेखी सकेको थिए,
मेरो मगर समुदायलाई त्यो सबै प्रमाण भएको महसुस लाग्दै छ । आगामी दिनमा मगर मात्रै होइन सम्पुर्ण अहिन्दु मुलबासी मंगोलको निम्ति आवाज उठाउनु पर्छ । एकजुट हुन जरुरी छ ।
लेखक :- मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन-डा.गोपाल गुरुङ प्रवास सभा मलेसिया सचिब राज दर्लामी मंगोल